Hakadka Galay Horyaalada Kala Duwan Ee Qaarada Yurub Waxay Fursado Siin Doontaa Ciyaartoy Ku Maqnaa Dhaawacyo Kala Duwan? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaallada kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyo kuwa kale ee dunida ayaa hakad loo geliyey xanuunka Coronavirus, waxaana ay dib u bilaabmi doonaan bisha dambe, hase yeeshee taasina hubanti maaha.
Waddanka Talyaaniga oo ah kan uu ugu daran yahay qaaradda Yurub, waxa uu Talyaanigu ku laayay dad badan, sidoo kalena Faransiiska, Germany, Spain iyo Britain ayaa intaba ay dad badan ugu dhinteen, walina wuxuu ku faafayaa xawaare la xakamayn kari la’yahay.
Tartamada horyaallada ee hakadka la geliyey, waxay faa’iido u noqdeen ciyaaryahanno dhaawac ku maqnaa oo soo kabanaya, kuwaas oo markii hore ay yaraayeen fursadda ay u heli doonaan inay kusoo laabtaan xili ciyaareedkan oo socda, hase yeeshee fasaxani jaanis u noqday.
Xiddigahan dhaawaca ah oo ay kooxahoodu daraadood u dhibaatoodeen, waxa qaarkood ay ku sugan yihiin waddamo kale oo aan ahayn kan ay kooxdoodu ka dhisan tahay, sababtuna waa inuu soo kabashadiisa u aaday meel ku habboon, sida cimilooyinka kulaylka ah iyo goobo ay ka dhow yihiin dhakhaatiir xirfadleyaal ah oo markii horeba qalliino ku sameeyey.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa ciyaaryahannada fursadda soo kabasho ay u noqotay hakadka la geliyey ciyaaraha, marka dib loo bilaabana rajada ka qaba inay safka hore kasoo raacaan amaba usbuucyo ka dib ay dib u xidhnaan funaanadda.
Paul Pogba (Manchester United): Xiddiga reer France waxa uu kasoo kabanaya dhaawacyo kuraanta iyo lugta ah oo uu ku maqnaa tan iyo dhamaadka sannadkii hore, kuwaas oo keenay inuu u baahdo qalliin iyo sookabashooyin. Waqtigiisa waxa uu ku qaadanayaa magaalada Dubai oo uu ku doortay cimilada kulaylka ah, laakiin tababare Ole Gunner Solskjaer ayaa tibaaxay in usbuucyada soo socda uu kubbad-sameeyahani kusoo laaban doono garoomada.
Hakadka galay horyaalka Premier League, waxa uu Pogba siinayaa fursad uu dib ugu soo laabto kulamada ugu soo horreeya ee kooxdiisa maadaama toddobaadyadii uu tababaruhu sheegay ay ku dhamaadeen waqtiga kala-guurka ah ee kulamada Premier League hakadka ku jireen.
Marcus Rashford (Manchester United) Waxa uu dhaawacmay isaga oo 19 gool u dhaliyey kooxdiisa, garoomadana laguma arag tan iyo January 15, xilligaas oo dhaawac muruqa ah oo heerka labaad ah uu soo gaadhay.
22 jirkan waxa hore loo sheegay in uu seegi doono ciyaaraha ka hadhsan xili ciyaareedkan, sidoo kalena waxa uu shaki ku jiraa in dalkiisa uu kala qayb-geli doono ciyaaraha Euro 2020 oo iyagana uu shaki ku jiro haddii ay bilaabmi doonaan bisha June. Laakiin tababare Ole ayaa bishii hore sheegay in Rashfrod ay suurtogal tahay inuu soo laabto ka hor inta aanu xili ciyaareedku dhamaanin, inkasta oo uu qiray inay adag tahay, laakiin waxa fursad uu kusoo laabto qaybaha dambe ee xili ciyaareedka siin karaya waqtiga uu horyaalku hakadka galay.
Harry Kane (Tottenham Hotspur) Maalintii sannadka cusub ee kooxdiisa Tottenham la kulantay khasaaraha 1-0 ah oo ay SOuthampton iska hor yimaaddeen, ayaa Harry Kane ugu dambaysay garoomada, waxaanu intii ka dambaysay oo dhan u jiifay dhaawac.
Toddobaadkii hore ayuu dib ugu soo laabtay tababarka, waxaanu bilaabay inuu si xorriyad ah u ordo, dhibaato la’aan kubadda u laado, isla markaana uu u muuqdo mid taam ah.
Bisha April marka uu horyaalku dib u bilaabmo, waxa Harry Kane uu ka mid noqon doonaa naadigiisa, waana xilligii marka horeba loo qorsheeyey inuu kusoo kabto.
Son Heung-min (Tottenham Hotspur) Spurs dhabarka ayay ka jabtay markii uu Son ku biiray liiska dhaawacyada, laakiin Isniinta maanta ayay ku beegan tahay waqtigii la filayey inuu garoomada kusoo laabto.
Laacibka reer Korea oo gacan ka jabay, waxa uu fursad u haystaa inuu laba toddobaad si fiican u qaato tababarka ka hor inta aanu horyaalku bilaabmin, kaddibna uu u halgamo sidii uu Jose Mourinho u badbaadin lahaa.
Alisson Becker (Liverpool): Goolhayaha koowaad ee Liverpool, waxa uu laba toddobaad ku seegayay ciyaaraha, laba kulanna hore ayay u dhaceen oo uu maqnaa, sida midkii Atletico Madrid ay ku karbaashtay ee uu Adrian qaladaadka waaweyn sameeyey.
Marka uu horyaalku bilaabmayo bisha dambe, Liverpool waxay dib u heli doontaa Alisson oo taam ah.
Xiddigaha kale ee dhaawaca ah ee iyagana uu fursadda u noqday fasaxu waxa ka mid ah: